Shirka Madasha Wadatashiga Qaran oo maanta la filaayo in Kismaayo uu ka furmo – STAR FM SOMALIA
Shirka Madasha Wadatashiga Qaran oo maanta la filaayo in Kismaayo uu ka furmo
Wararkii ugu dambeeyay ee Magaalada Kismaayo ka imaanaya, ayaa sheegaya in maanta la filaayo inuu si rasmi ah Magaalada Kismaayo kaga furmo Shirka Madasha Wadatashiga Qaran ee looga arinsanaayo nooca Doorasho ee Somaliya ka dhaceysa sanadkan gudihiisa.
Ammaanka Magaalada ayaa si weyn loo adkeeyay, waxaana maanta Magaalada la filayaa inuu tago Madaxweynaha Somaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo Jowhar ka ambabaxaayo.
Suxufiyiinta ku sugan Magaalada Kismaayo ayaa soo sheegaya in Magaalada ay ka socoto qaban qaabadii ugu dambeysay ee la xiriirta soo dhaweynta Wafdiga Madaxweynaha ee saacadaha soo socda la qorsheynaayo inay Kismayo ka degaan.
Shirkan Madasha Wadatashiga Qaran oo baaqday saddexdii maalin ee la soo dhaafay ayaa u baaqday sababo ku aadan Madaxweynaha Somaliya oo aanan wali tagin Magaalada Kismaayo, maadaama furitaanka Shirka isaga laga doonaayo inuu furo.
Madaxda Maamul Goboledyada ayaa ku sugan Magaalada Kismaayo, marka laga reebo C/kariin Xuseen Guuleed oo shalay tagay Jowhar xalayna halkaasi ku hooyday, balse la filaayo in uu raaco maanta Wafdiga Madaxweynaha.
Xubno kale oo Beesha caalamka ka socda ayaa jooga Magaalada oo u jooga ka qaybgalka Shirka maanta ka furmaayo Magaalada Kismaayo ee Doorashada Somaliya looga hadlaayo.
Askari ka tirsan Booliska Kenya oo Mombasa lagu dilay, Qorigii uu watay iyo lacagna laga qaatay
Iiraan oo gacanta ku dhigtay labo Doonyood ay leeyihiin Ciidamada Badda Mareykanka